Kutheni iVodka ingafaki kwiFreezer?
Ukuba ubeka ibhotile ye-vodka kwifriji yakho, utywala lugqithisa, kodwa aluyi kuba lukhulu. Oku kungenxa yokuveliswa kweekhemikhali ze-vodka kunye nesimo esibizwa ngokuba yi- cooling point depress .
I-Composition Composition yeVodka
UMendeleev , isazi samakhemikhali esilungiselele iitheyibhile zexesha eliqhelekileyo , silinganisa inani le-ethyl yotywala-okanye i- ethanol - in vodka xa engumlawuli weRussia Bureau of Standards.
I-vodka yaseRussia i-ethanol engama-40 kunye namaphesenti angama-60 ngamanzi ngevolumu ( ubungqina abangama- 80). I-Vodka evela kwamanye amazwe ingaba ngama-35 ekhulwini ukuya kuma-50 ekhulwini ethanol ngokwevolumu. Zonke ezi zixabiso zinxilisayo ngokwaneleyo ukuba zichaphazele kakhulu iqondo lokushisa apho umbane ukhululeka khona. Ukuba kwakungamanzi acocekileyo, bekuza kubombela kwi-0 C okanye kwi-32 F. Ukuba i-vodka yayingumntu ococekileyo okanye utywala ngokugqithiseleyo , yayiza kubanda kwi--114 C okanye -173 F. Ingqungquthela yomxube ingumlinganiselo ophakathi.
I-Ethanol kunye nePressing Point Depression
Xa uchithe nawuphi na umbane emanzini, uyanciphisa indawo epholileyo yamanzi. Le nto iyaziwa njengengqungquthela yokudakumba . Kunokwenzeka ukukrazula i-vodka, kodwa kungekhona kwifriji yasekhaya. Iphoyinti elikhuphayo le-vodka elingama-80 li--26.95 C okanye -16.51 F, ngelixa iqondo lokushisa labaninzi befriji yekhaya lijikeleze -17 C.
Indlela yokukhuphela iVodka
Enye indlela yokufumana i-vodka yakho eyongezelelweyo kubanda kukubeka kwibhakethi ityuwa kunye neqhwa.
Eziqulatho ziya kuba ziqine ngaphezu kweqhwa eliqhelekileyo, njengomzekelo wokudakumba kwengqondo. Ityuwa ibangela ukushisa kwehla ngaphantsi kwe-21 C, engabonakali ngokwaneleyo ukuba ifakelwe i-vodka engqinelana no-80 kodwa iya kwenza i-vodka-sicle ngaphandle komkhiqizo ongeyotywala. I-ice salting isetyenziselwa ukwenza ice cream ngaphandle kwefriji.
Ukuba unqwenela ukukrazula i-vodka yakho, unokusebenzisa i- ice okanye i-nitrogen enomlambo . I-vodka ejikelezayo ngeqhwa elomileyo lihla iqondo lokushisa ukuya kwi--78 C okanye -109 F. Ukuba uthe wongeza i-chips yeqhwa elomileyo kwi-vodka, i-sublimation ye-carbon dioxide iya kwenza ama-bubbles kwindawo yamanzi, ngokuyinqobo ikunike i-carbonated vodka (enayo i flavored). Qaphela ukuba, ngelixa kulungile ukuongeza inani elincinci leqhwa elomileyo ukwenza ama-bubbles, ngokwenene iqanda i-vodka liza kuvelisa into ebandayo kakhulu ukusela (cinga i-frostbite).
Ukuba uthela enye ye-nitrojeni yamanzi kwi-vodka, uya kufumana inkungu njengoko i-nitrojeni ihamba. Le ngqungquthela epholileyo kwaye inokuvelisa iinqwelo ze-vodka ice. I-nitrojeni yotywala ibanda kakhulu, yonke indlela ukuya kwi -196 C okanye -320 F. Nangona i-nitrogen engamanzi ingasetyenziselwa ngabagqwelisi ukuvelisa (ngokoqobo) imiphumo epholileyo, kubalulekile ukuba uqaphele. I-vodka enefriji ikhuni ngaphezu kwefriji, eyabangela ukuba kubande kakhulu!
I-PPM Inkcazo (Icandelo NgamaMillion)
Iinkonzo kunye neNgcono yokujoyina i-Union Union
Ngoku Maye Masidumise Amatye aKhe
I-Par 5 (i-Par-5 Hole)
Ukutshisa amaqabunga ahlayo angabangela ingozi kwimpilo yakho
Isikhokelo sokuphuhlisa iinkqubo ze-Delphi kwi-Windows API (ngaphandle kokusetyenziswa kweVCL